RISC-V inouya kuPC ine nyowani mamaboard yevagadziri | Linux Vakapindwa muropa
RISC-V inouya kuPC ine nyowani mamaboard yevagadziri
Kutenda kuSiFive neiyo HiFive isina kuenzaniswa bhodhi, izvozvi RISC-V zvakare inouya iyo PC. Nhau huru, kunyanya kune vanogadzira vanoda yakasimba, yemuno chikuva chinoenderana neiyi ISA. Uye zvakare, inogona kushanda ichishandisa zvakajairika zvikamu zvePC uye neLinux kugoverwa senge inoshanda sisitimu.
Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kuziva izvo iwe unogona ikozvino kuwana pre-kutenga zveichi chigadzirwa kubvira SiFive yepamutemo webhusaiti. Mutengo waro unenge uri nezve € 665, uye kana iwe uchida zvimwe zvakawanda, unogona kuenderera kuverenga zvese izvo izvi zvitsva RISC-V-yakavakirwa ndiro inogona kuunza kune yako desktop ...
La SiFive HiFive Isingaenzaniswi Iyo mamaboard ine miniIXT fomu chinhu uye inoenderana nechero magetsi uye shongwe yerudzi urwu rweyakajairwa. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuwedzera iyo PCIe kadhi yemifananidzo iyo iwe yaunogona kushandisa mune chero x86 komputa, pamwe naMXXMUMX SSD madhiraivha akaomarara uye network kadhi mune imwecheteyo fomati. Saka iwe unogona kuvaka yakazara RISC-V PC.
ari hunyanzvi hunhu yeiri mamaboard ndeaya:
Muenzaniso: HiFive Isingaenzaniswi
SoC: SiFive Rusununguko U740 yakavakirwa paRISC-V
QuadCore SiFive U74-MC 64-chidimbu.
7-bit SiFive S64 (Chaiyo-Nguva) musimboti
RAM ndangariro: 8 GB DDR4 yakabatanidzwa paboardboard (soldered).
Self Storage: 32 MB SPI Flash yebhutsu inokurumidza
M.2 PCIe (3rd Gen) x4 slot yeNVMe SSD hard drive
M.2 E-Key slot yeBluetooth kana WiFi network adapta
PCIe Gen 16 x3 slot (8-nzira) yemakadhi emifananidzo (chero munhu anoshanda neiyi interface yeX86, senge AMD neNVIDIA).
Kubatana uye ini / O madoko:
Gigabit Ethernet LAN kana RJ-45
4 USB 3.2 Gen 1 Type-A madoko
2 microUSB Type-B madoko
GPIO, I2C, QSPI, UART uye PWM
Battery: kuchengetedza iyo RTC.
Chinhu chinhu: mini-ITX (170x170mm). Inogona kuiswa mune chero shongwe inotsigira fomati iyi, pamusoro pekushandisa chero magetsi (150w) inoenderana ne miniITX uye 24-pini yekubatanidza.
Yakatsigirwa OS uye software:
Inoenderana neGNU / Linux distros.
Shandisa kit Rusununguko U-SDK iyo yaunogadzira neyako tsika Linux distro. Inosanganisira Linux kernel, uye mamwe mapakeji ebudiriro senge U-Boot, OpenSBI, U-Boot SPL, iyo GNU GCC compiler, ine simba LLVM maturusi, nezvimwe.
Mutengo: 665 $
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » RISC-V inouya kuPC ine nyowani mamaboard yevagadziri
Raspberry Pi 400: sangana neiyo nyowani "keyboard-PC"
Emulatrix, emulator yakavakirwa paLibretro iyo inobvumidza iwe kuti utambe kubva kubhurawuza uye pasina kushambadzira nema emulators akasiyana